Xilliga uu Macallin Jose Mourinho qabanayo shaqada kooxda Real Madrid oo la shaaciyey – Gool FM
(Madrid) 9 March 2019. Sida wararku ay sheegayaan macallin Jose Mourinho aya dib ugu soo laaban kara kooxda Real Madrid bartamaha isbuucan si uu kooxda markale u hoggaamiyo.
Mourinho ayaa dib ugu soo laaban doona shaqada tababarennimo ee kooxda Real Madrid Isniinta soo socota, sidaas waxaa warinaya Madaxweynihii hore ee kooxda Ramon Calderon.
Tababaraha reer Portugal ayaa laga cayriyey shaqada kooxda Manchester United bishii December ee sanadkii la soo dhaafay, waxaana la la xiriirinayey inuu dib ugu laaban doono garoonka Bernabeu maadaama uu shaki ku jiro mustaqbalka macallin Santiago Solari ee Real Madrid kaddib markii kooxda dhowaan laga soo reebay tartanka Champions League.
Mourinho ayaa saddex xilli ciyaareed ku qaatay kooxda Real Madrid isagoo tababare ah intii u dhaxaysay sanadihii 2010-kii iyo 2013-kii, waxaana uu kula guuleystay horyaalka La Ligaha Spain sanadkii 2012-kii.
Kaddib markii ay macallin Jose isku dhaceen Sergio Ramos & Goolhaye Iker Casillas sidoo kale uu cadaadis kala kulmay kooxda Barcelona oo uu waqtigaas hoggaaminayey tababare Pep Guardiola ayaa sababtay inuu isaga dhaqaaqo caasimadda Spain ee Madrid.
Yeelkeede, Calderon oo ah Madaxweynihii hore ee kooxda Real Madrid ayaa qaba in waqtigaan la joogo ay tahay waqti ku habboon inuu mar labaad ninka isku magacaabay ‘Special One’ uu ku soo laabto Madrid.
Would #Mourinho ever return to @realmadrid? See what he’s got to say…
Or head to our website for the full discussion 👉 https://t.co/74ET1qSVXq#beINMourinho #beINLiga #RealMadrid pic.twitter.com/4nVgPSZdzu
“Anigu waan fahamsanahay in Mourinho uu saxiixi doono heshiiska inta ka dhiman xilli ciyaareedkan iyo saddex sanadood oo kale, isagoo mushahar ahaan u qaadanaya 17 milyan oo gini sanadkii,” Calderon ayaa sidaasi ku qoray Wargeyska.
“Madaxweyne (Florentino Perez), Mourinho wuxuu noqon doonaa kan ugu fiican ee wajaha Saxaafadda, Taageerayaasha iyo Ciyaartoyda.”
“Laakiin ma noqon doonto mid sahalan, waxaan saadaalinayaa inay aad u adag tahay saddexda bilood ee soo socda.”
Isagoo ka hadlayey suurtagalnimada isbedelka u dhexeeya Mourinho iyo Ramos, Calderon ayaa hadalkiisa raaciyay: “Waxa ay ku xirnaan doontaa waxa uu Ramos sameyn doono.
“Taageerayaasha waa ay jecel yihiin isaga, waa mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan kooxda, wuxuuna isagu doonayaa inuu xirfaddiisa ku soo gabagabeeyo Real Madrid.”
Si kastaba ha ahaatee, ma jiro war ka soo baxay Macallin Jose Mourinho iyo Kooxda Real Madrid labadaba oo xaqiijinaya in macallinkii hore ee Man United inuu mar labaad hoggaamin doono Los Blancos.
Shaxda rasmiga ah kulanka kooxaha Manchester City Vs Watford